Shaqo La'aanta Dhallinyarrada ee La Shaaciyay oo gaartay 27 boqolkiiba | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulShaqo La'aanta Dhallinyarrada La Soo Bandhigay Oo Kordhay 27 Boqolkiiba
Shaqo La'aanta Dhallinyarrada La Soo Bandhigay Oo Kordhay 27 Boqolkiiba
19 / 05 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
dhalinyarada ayaa qeexay shaqo la'aantu inay gaartay boqolkiiba boqol
Qiyaastii 15 boqolkiiba dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 24-18 ee ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. In kasta oo heerka is-diiwaangelinta ee dugsiga sare uu yahay 88,8 boqolkiiba, 259 kun oo dhalinyaro ah ayaan waxna qorin waxna qorin. Shaqo la’aanta dhalinyaradu waxay gaadhay 24,8 boqolkiiba, waxaana si balaadhan loo qeexay shaqo la aanta dhalinyarada inay gaadhay 27 boqolkiiba. Iyadoo boqolkiiba 74 dhalinyarada aan ku jirin xoogga shaqaalaha ay ku lug leeyihiin waxbarashada; Boqolkiiba dadka aan waxbarasho ama shaqo helin waa boqolkiiba 25. Dadka ugu da'da yar waxay ku nool yihiin Esenyurt. 178 kun 846 oo dhalinyaro ah ayaa is qaba; Boqolkiiba 16 kuwa guursada inta u dhaxaysa 19-91 waa haween. Intii u dhaxaysey 15-19, 4 kun 935 haween ah ayaa dhaley. 16% dumarka la furay intii u dhaxaysay 24-78 waxay ahaayeen haween.
Xafiiska Tirakoobka Magaalada Istambul ee Magaalada Istanbul wuxuu falanqeyn ku sameeyay dhalinyarada ku nool magaalada Istanbul munaasabadda 19 May ee xuska maalinta Atatürk, Maalinta dhalinyarada iyo Ciyaaraha. Falanqaynta ayaa gaartay gunaanadka:
Dhalinta ayaa ka kooban 15 boqolkiiba dadweynaha
15 milyan 24 kun oo dhalinyaro ah oo da’doodu u dhaxayso 12-900 sano ayaa ku nool dalka Turkiga, 2 milyan 300 kun ayaa ku nool Istanbul. 15 milyan 19 kun 1 dhalinyaro ah oo da’doodu u dhaxayso 89-505 waxay ku nool yihiin Istanbul iyo 20 milyan 24 kun 1 dhalinyaro ah oo da’doodu tahay 217-874. Dhalinta ayaa ka kooban 15% dadka reer Istanbul. In kasta oo tirada dhalinyarada imanaya Istanbul ee ka imanaysa meel ka baxsan gobolka ay ahayd 2019 kun iyo 147 sanadka 396, tirada dhalinyarada ka tagaysa gobolka waxay ahayd 105 kun 39.
Inta u dhaxaysa 14-24 kun 259 qof ayaa waxna qori karin
Waxaa la ogsoon yahay in inta u dhaxaysa 14 - 24-sano-jirarada ka jira Istanbul, 259 kun oo qof oo aan waxna qorin waxna qorin. Dalka Turkiga, tirada dadka isku da'da ah ee aan wax qorin waxna qorin waxay ahaayeen 11 kun 733.
Heerka isqorista saafiga netka ah ee 88,8 boqolkiiba
Heerka isqorista saafiga ah ee waxbarashada dugsiga sare (dugsiga sare) ee Istanbul wuxuu ahaa 88,8 boqolkiiba. In kasta oo heerka is-diiwaangelinta saafiga ah ee dugsiga hoose uu ahaa 93,1 boqolkiiba, 94,6 boqolkiiba dugsiga sare, heerkaan ee dugsiga sare wuxuu ahaa 88,8 boqolkiiba. Saamiga isdiiwaangelinta saafiga ah ee heerka dugsiga sare waxaa lagu diiwaangeliyay boqolkiiba 84,2 gudaha Turkiga.
Tirada shaqaalaha inta u dhaxaysa 15-24 1 milyan 200 kun
Tirada dadka u dhexeeya da'da 15-24 ee ka diiwaangashan magaalada Istanbul shaqo ahaan waxay ahaayeen 1 milyan 200 kun. 62 boqolkiiba ragga da'dan ayaa lagu daray xoogagga, halka 39 boqolkiiba dumarka ay ka diiwaangashan yihiin xoogga shaqada.
Tirada dadka ay da'doodu u dhaxayso 15-24 iyo shaqaaluhu waxay ahaayeen 882 kun.
15 boqolkiiba dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 24-38 waxay ka shaqeeyeen Istanbul. Boqolkiiba 30 boqolkiiba Turkiga.
Shaqo la’aanta ku baahsan dhalinyarada 27 boqolkiiba
In kasta oo 15 kun oo ka mid ah dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 24-291 ee xoogga shaqaalaha ee Istanbul ay yihiin shaqo la'aan, heerka shaqo la'aanta dhalinyarada ayaa ahayd 24,8 boqolkiiba. Marka lagu daro kuwa aan rajo ka qabin inay shaqo helaan iyo kuwa aan shaqo raadineyn laakiin diyaar u ah inay shaqeeyaan, tirada shaqo la’aanta dhalinyarada ee Istanbul ayaa kordhay 27 boqolkiiba.
15 boqolkiiba kuwa aan ku jirin shaqada inta u dhaxaysa 24-74 waxay ku jiraan waxbarasho
In kasta oo 15 boqolkiiba kuwa aan ku jirin xoogga shaqaalaha da'da 24-74 ee ku sugan Istanbul ay ku jiraan waxbarasho, 12 boqolkiiba waxay u diiwaan gashan yihiin inay ku mashquulsan yihiin shaqada guriga. Tirada haweenka u dhexeeya 15 iyo 24 ee aan shaqeyn karin ama wax baran karin ayaa ahaa 130 maxaa yeelay waxay ku mashquulsanayd shaqada guriga.
N25 boqolkiiba dhalinyarada waxay ku jiraan e-waxbarasho iyo shaqo
Tirada dhalinyarada aan wax baran ama aan ka shaqeyn magaalada Istanbul waxaa loo diiwaan geliyey 579 kun. In kasta oo 15 boqolkiiba dadka da'doodu u dhaxayso 24-38,2 ay shaqeeyaan, ayaa 35,2 boqolkiiba ay waxbarashadooda sii wadaan halka 25 boqolkiiba iyaga ka mid ahi ayan ku jirin waxbarasho ama shaqo toona.
Inta badan dhalinyarada ku nool Esenyurt
Degmada Esenyurt waxay ahayd degmadii ugu dadka badneyd, iyadoo 15 kun 24 dhalinyaro ah ay da'doodu u dhaxayso 148-837. Degmooyinka ay ku noolyihiin in kabadan 100 kun oo dad ah oo udhexeeya da'da 15-24 waxay kala ahaayeen Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik iyo Ümraniye. Marka la eego saamiga dadweynaha degmada, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Esenler, Bağcılar iyo Sultangazi waxay ka mid ahaayeen degmooyinka dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 15-24 ay ku urursan tahay.
Dadka dhalinyarada ah waxay inta badan ku nool yihiin Zümrütevler Mahallesi
Zümrütevler (Maltepe), Zafer (Bahçelievler) iyo Kayabaşı (Başakşehir) ayaa kaalinta koowaad ka galay xaafadaha magaalada Istanbul, oo ah meesha ugu badan ee dhalinyarada da’doodu tahay 15-24 sano. Xaafadaha kale ee dadka dhalinyarada ah ku badan yihiin waa Başak (Başakşehir), Sanadka 50aad (Sultangazi), Adnan Kahveci (Beylikdüzü), Halkalı Xaruntu waxay ahayd (Küçükçekmece), Karadeniz (Gaziosmanpaşa), Canary (Küçükçekmece) iyo Yeşilkent (Avcılar).
178 kun 846 oo dhalinyaro ah ayaa is qaba
In kasta oo 15 kun 24 oo dhalinyaro ah oo da'doodu u dhaxayso 178-846 ay ku guursadeen magaalada Istanbul, boqolkiiba 81 dadkaasi waa haween. Esenyurt wuxuu ka mid ahaa degmooyinka ay ku guursadeen dhalinyaro badan. Markii furiinnada iyo kuwii dhintay sidoo kale lagu daray, waxaa la duubay tirada dhallinyarada da’doodu u dhaxayso 15-24 ee isguursaday oo gaadhay 183 kun 642. Esenyurt, Bağcılar, Sultangazi, Küçükçekmece iyo Sancaktepe waxay ahaayeen kuwa ugu sareeya degmooyinka ay da'yarta u dhaxayso 15-24 ay ku urursan yihiin.
Boqolkiiba 16 kuwa guursaday ee u dhexeeya da'da 19-91 waa haween
In kasta oo tirada dhalinyarada u dhaxaysa 2019-16 ee guursaday sannadka 19 magaalada Istanbul ay ahayd 7, tirada dadka u dhaxaysa 505-16 sano jir ee guursaday waxay ahaayeen 24 kun 55. In kasta oo saamiga haweenka ay da'doodu u dhaxayso 313-16 ee guursaday sanadkii la soo dhaafay uu ahaa 19 boqolkiiba, tiradaan ayaa loo diiwaan geliyey inay tahay 91 boqolkiiba kooxda da'da 16-24.
15 kun 19 haween ah waxay dhasheen intii u dhaxeysay 4-935
Tirada haweenka ku dhaley inta u dhaxaysa 2019-15 magaalada Istanbul sanadkii 19 waxay ahaayeen 4 kun 935. Turkiga, tirada dhalashada isla da'da kooxdu waxay ahayd 53 kun 189.
16 boqolkiiba kuwa la furay intii u dhaxaysay 24-78 waa haween
Tirada dadka ay is fureen intii u dhaxeysay 2019-16 jir magaalada Istanbul sanadki 24 ayaa ahaa 2, iyo saamiga dumarka la furay ee ahaa 715 boqolkiiba. Dalka Turkiga oo ah koox da 'isku mid ah, tirada dadka furiinka ah ee ka dhacday sannadka 78, 2019 kun 21, halka haweenku ay ka yihiin 189 boqolkiiba dadkaas.
Riyada Da'yarta Dhallinyarada ah waxay u kicisaa cirifka garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Tareenada Dhallinyaradu waxay soo bandhigeen Eskisehir Fair Fair
Duufaan Baraf ah ayaa lagu kordhiyay Ximmadka Ximmadka ee Erciyes Ski Resort
Diyaarado Dagaal Oo Hawada Difaaca Cirka Japan Oo La Soo Bandhigay
Iscasilaada Admiral Cihat Yaycı waa la aqbalay